राप्रपाका नेता काँग्रेसमा प्रवेश
ललितपुर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल ललितपुर क्षेत्र नं– १ का अध्यक्ष प्रकाशबहादुर खत्री नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । काँग्रेसद्वारा बिहीबार बेलुका आयोजित नव आगन्तुकलाई पार्टी प्रवेश ...
स्थिर सरकारका लागि बाम गठवन्धन : उपाध्यक्ष ज्ञवाली
दाङ । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले स्थिर सरकारले मात्रै नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न र देशलाई समृद्धिको मार्गमा लग्न सक्ने बताउनुभएको छ । एक वर्ष नटिक्ने सरकार कै कारण विकास निर्माणको काम अ...
यु १९ एसिया कप : वर्षाले खेल अवरुद्ध ,नेपालले हार्ने सम्भावना
काठमाडौं । उन्नाइस वर्षमुनिको एसिया कप क्रिकेटमा फाइनल यात्राका लागि नेपाल र अफगानिस्तानबीच खेल भइरहेको छ । मलेसियाको किनरारा ओभल मैदानमा अफगानिस्तानले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङमा आएको नेपालले...
विप्लवको पार्टीमाथि प्रहरीको निगरानी, ४ कार्यकर्ता पक्राउ
भोजपुर,मंसिर १ । देशका बिभिन्न भागमा उम्मेदवारहरुलाई लक्षित गरेर अक्रमण बढेपछि प्रहरीले नेत्रविक्रम चन्द(विप्लव) का नेता तथा कार्यकर्तामाथि प्रहरीले निगरानी बढाएको छ। यद्यपी सो पार्टीले उम्मेदवारमाथि...
नेपालले दियो अफगानिस्तानलाई १०४ रनको लक्ष्य, अनिलको अर्धसतक
काठमाडौं । उन्नाइस वर्षमुनिको एसिया कप क्रिकेटमा फाइनल यात्राका लागि नेपाल र अफगानिस्तानबीच खेल भइरहेको छ । मलेसियाको किनरा ओभल मैदानमा अफगानिस्तानले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङमा अाएको नेपालले २...
एसिया कप सेमिफाइनल : नेपाल-अफगानिस्तान भिड्दै(लाइभ)
काठमाडौं । मलेसियामा जारी एसीसी यू-१९ एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा अहिले नेपाल अफगानिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । किनरारा ओभलमा भएको खेलमा अफगानिस्तानले टस जिति नेपाललाई ब्याटिङको ...
पहिले बुझ्न बाँकी तथा नयाँ मतदातालाई परिचयपत्र वितरण गर्ने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि स्थानीय तह निर्वाचनमा परिचयपत्र बुझ्न बाँकी तथा नयाँ मतदातालाई परिचयपत्र वितरण गर्ने भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदात...
वामपन्थी एकताबाट कांग्रेस आत्तिनु पर्दैन : ओली
फलेवास, पर्वत । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकता देखेर दक्षिणपन्थी शक्ति अत्तालिएको बताएका छन् । संयुक्त वाम गठबन्धन निर्वाचन परिचालन समिति पर्वतले आज...
काठमाण्डौ । नेपाली चलचित्र 'भैरे' घोषणा भएको छ । राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै दयाहाङ्ग राई, सुनिल थापा, विक्रान्त बस्नेत, सुरक्षा पन्त, बर्षा सिवाकोटी स्टारर यस चलचित्रको पुजाआजा गरिएको छ । ...
बामपन्थीहरु मिलेर जनताको मुहारमा खुसी ल्याउने– नेता पोखरेल
दाङ, कार्तिक ३० । नेकपा एमालेका नेता तथा दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेश सभा १ का उम्मेदवार शंकर पोख्रेलले बामपन्थीहरु मिलेर जनताको मुहारमा खुसी ल्याउने बताएका छन् । विकसित देशहरुमा थोरै पार्ट...
बझाङमा एक शिक्षक मृत अवस्थामा भेटिए
काठमाडौं । बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका वडा नं. ३ साविकको हेमन्तवाडामा रहेकाे पाण्डु उ.मा.वि पडेस नजिकै एक मृत लास फेला परेको छ । बझाङ प्रहरीका अनुसार आफुहरुलाई सबै जानकारी नआएपनि अन्दाजी ४० वर्षका त्यी...
जुम्लामा ट्र्याक्टर दुर्घटना, दुई सहचालकको मृत्यु
जुम्ला । गुठीचौर गाउँपालिका–१ मणिसाँघुमा सोमबार राति भएको भे१त ७३८६ नंको ट्र्याक्टर दुर्घटनामा दुई सहचालकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा चन्दननाथ नगरपालिका–८ तलिउम जुम्लाका १७ वर्षीय ललित धराला र जा...
उम्मेदवारलाई सुरक्षा दिन एमालेको माग
काठमाडौँ,कात्तिक २९ । नेकपा (एमाले) ले आफ्ना उम्मेदवारमाथि लक्ष्य गरी आक्रमण र धम्कीको शृङ्खला नरोकिएको जनाउँदै उम्मेदवारहरुलाई सुरक्षा दिन माग गरेको छ । एमाले केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीले आगाम...
माओवादी अध्यक्ष सहित उम्मेदवारबाट आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता
चितवन,कात्तिक २९ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्ना तर्फबाट निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्णपालना गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले ...
भाइरल भिडियो : सलामी पाउने नेताको अनौंठो रहर ,सलामी कहाँ र कुनवेला प्रहरी ?
नेताहरु किन मन्त्री बन्न खोज्छन्? किनभने, मन्त्री बनेपछि मानसम्मान पाइन्छ। गाडीलगायतका सुविधा पाइन्छ। सेना–प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायको सलामी पनि पाइन्छ। यस्ता सम्मान पाएपछि आफूलाई समर्थन गर्छन्, प...
एमाले निर्वाचन परिचालन कमिटीको प्रवक्ता रिमाल
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीको प्रवक्तामा पोलिटब्युरो सदस्य बिष्णु रिमाल तोकिएका छन् । आगामी मङ्सिर १० र २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पार्टीको त...
संखुवासभा । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा आज बिहान सभापोखरी गाउँपालिकामा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार सवार गाडीमाथि हातेबम प्रहार भएको छ । जिल्लामा प्रतिनिधिसभाका लागि वाम गठ...
काठमाडौँ । नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)बीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता भुवनप्रसाद आचार्यले केही प्राविधिक विषयमा दुई देशबीच सहम...
राजविराज । सप्तरीको बोदेवरसाइन नगरपालिकामा आज अपराह्न एक व्यक्तिले आफ्नी श्रीमतीलाई हँसिया प्रहार गरी हत्या गरेको आरोप लगाइएको छ । बोदेवरसाइन नगरपालिका– ३ निवासी जयप्रकाश यादवले अन्दाजी ३८ वर्षीया श्...